အေးငြိမ်း - ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် မိုင် ၂၀၀၀ ကိစ္စ - MoeMaKa Media
Home / Aye Nyein / Community / Coronavirus / Experience / Singapore / အေးငြိမ်း - ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် မိုင် ၂၀၀၀ ကိစ္စ
အေးငြိမ်း - ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် မိုင် ၂၀၀၀ ကိစ္စ
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ အရေးတကြီး ပြင်ပေးနေရသောကြောင့် ကျွန်တော် အလွန် အင်မတန် အလုပ်ရှုပ်နေပါသည်။ သူ အလုပ်အပ်တာကလည်း အလွန်နောက်ကျလှ၏။ နောက်ပြီး အပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်း တွေက နည်းနည်းနောနောမဟုတ်။ ယခု မတ်လနောက်ဆုံးပတ် အပြီးတင်ရမည်။ အခု တစ်ဝက်တောင် မပြီးသေး။
ဆိုတော့ တခြားဘာစာမှ မရေးဖြစ်၊ မဖတ်ဖြစ်ပါ။ ဖေ့စ်ဘုတ်တောင် ရထားပေါ်။ ထမင်းစားရင်းလောက်သာ ဖတ်ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတော့ မပြောမဖြစ် ပြောရတော့မည့် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာ၍ အကျဉ်းမျှ ပြောပါမည်။ အကျယ်သိလိုသူများအတွက် ဖတ်နိုင်ရန် link များ ပေးထားပါသည်။
မနေ့က ထမင်းစားရင်း ဖေ့စ်ဘုတ်ဖွင့်ကြည့်တော့ ခုနင်က တင်ထားသည့် ပို့စ်ပါ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်မိ၏။ ည ကတည်းက ရေးမလို့ဟာ မရေးဖြစ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညက ၄ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရသမို့ စောစောအိပ်ယာဝင်လိုက်ရ၏။ သို့မို့ကြောင့် ယနေ့ သင်တန်းကအပြန် (မြန်မာစာသင်ရင်း) ကောက်ကက် ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဤပို့စ်အတိုလေးကြောင့်ပင် အတော်လေး ပွဲဆူသွားသမို့ နည်းနည်းတော့ ရှည်လိုက်အုံးမှ ဖြစ်မည်ဆိုကာ ဤပို့စ်ကို ထပ်ရေးပါသည်။
ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး၏ ပြောဆိုချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မတွေ့ရခြင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စဖြစ်ရာ ဒေသနှင့် ဝေးကွာလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုပါသည်။ သက်သေခိုင်လုံရန် အချက်အလက်များနှင့် ရှင်းထားသေး၏။
ဆိုတော့ သည်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မတွေ့ရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေမှာ ဗိုင်းရပ်ပိုး ရှိနေတာကို မဖော်ထုတ်နိုင်လို့မဟုတ်၊ အမှန်တကယ့်ကို ရှိမနေတာပါ ဆိုသည်ကို သက်သေပြလို၍ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလှပါသည်။
ဤကဲ့သို့သက်သေပြနိုင်ရန်လည်း အပင်ပန်းခံကာ အချက်အလက်များကို အလွန်များစွာ ရှာဖွေစုဆောင်းထားကြောင်း လည်း တွေ့ရပါသည်။
ဤသည်မှာ မယောင်ရာဆီလူးပြီး၊ ခါးတောင်းကျိုက်တလွဲ ဖင်တလွဲ ဖြစ်နေတာသာ ဖြစ်ပါသည်။
တကယ်လုပ်ရမည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်ပဲ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မကူးစက်သည့် လူနာရှိမနေတာလား။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့သည့် လူနာသည် အဘယ်ကြောင့် သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရသနည်း။
၎င်းဘယ်နေရာတွေ သွားခဲ့သည်။ ဘယ်သူတွေနှင့် ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့် ဆက်ဆံခဲ့သူများတွင်ရော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေ သလား စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ဂဃနဏလေ့လာဖော်ထုတ်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်က စင်ကာပူမှာနေတော့ စင်ကာပူအကြောင်းပဲ နမူနာထား ပြောရပါမည်။
စင်ကာပူအစိုးရကတော့ စင်ကာပူကို တရုတ်ပြည် ဘယ်ဒေသကလူတွေ ဘယ်နေ့က ဘယ်နှစ်ယောက် ဝင်လာသလဲ။ သူတို့ ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်ကြသလဲ၊ ဘယ်တွေသွားကြသလဲ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံသလဲ၊ အဲဒီ အထဲက ဘယ်သူ့တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံထားရသလဲ စသည်ဖြင့် အားလုံးကို အသေးစိတ် ဖော်ထုတ်ပါသည်။
တရုတ်ပြည်က လာသူတွေကို ဘယ်ကိုမှ မသွားစေဘဲ ၁၄ ရက် အခန်းအောင်းခိုင်းထားကာ သူတို့အခြေအနေကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
(ဘယ်မှမသွားရဟု အမိန့်ထုတ်ထားသည်ကို မလိုက်နာဘဲ ဟိုဟိုသည်သည် လျှောက်သွားသူ ၄ ယောက်ကို ပါမစ် cancel လုပ်ကာ ချက်ချင်းပြန်ပို့လိုက်ပါသည်။ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာမူ သူတို့သွားသည့်နေရာများကို အမှန်မပြောဘဲ လိမ်ညာပြောသဖြင့် မင်းတို့ ဘယ်နေ့တွေက ဘယ်နေရာတွေကို သွားခဲ့သည် စသဖြင့် အသေးစိတ်ဖော်ထုတ်ကာ တရားစွဲခဲ့သည်။ ထုတ်ပေးထားသည့် PR status ကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။)
ကူးစက်ခံထားရသူများကို Case No. များ ပေးထားကာ သတင်းထုတ်ပြန်သည့်အခါ ထို case no. များကို ရည်ညွှန်း ထုတ်ပြန်သည်။
နမူနာပြရလျှင် Case No. 104 မှာ မြန်မာအိမ်အကူ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို Case No. 103 (သူ့အိမ်ရှင်) ဆီက ကူးသည်။ NTU ပါမောက္ခမှာ ဘယ်မှမသွားပါဘဲလျက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့တော့ ဘာကြောင့်လဲ လိုက်ရှာသည်။ ထိုအခါ သူတို့ဌာနက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်တွင် ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်ခံထားရကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုဝန်ထမ်းမှာ စင်ကာပူ၌ အဓိက ဗိုင်းရပ်ပိုး ပြန့်ပွားရာ နေရာကြီး ၅ ခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှ ကူးစက်ခံလာရတာဖြစ်သည် စသဖြင့် ဖြစ်၏။
ထို့ပြင် နေ့တိုင်းလည်း သည်ကနေ့ ဘယ်နှစ်ယောက် ကူးစက်ခံရသည်။ ဆေးရုံတက်နေတာ ဘယ်နှစ်ယောက်၊ ဆေးရုံက ဆင်းသွားတာ ဘယ်နှစ်ယောက်၊ အသည်းအသန်ဖြစ်နေတာ ဘယ်နှစ်ယောက် စသည်တို့ကို ထုတ်ပြန်ပေးနေသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုလည်း အစိုးရအင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ရှာဖွေကြည့်နိုင်သည်။ အောက်မှာ လင့် အချို့ပေးထားပါသည်။
ဆရာမကြီး သုတေသနပြုထားသည့် တရုတ်ပြည်က ဘယ်ပြည်နယ်မှာ ဘယ်နေ့က စဖြစ်တယ်။ ဟူပေပြည်နယ်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်သေတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပက ၈၅ နိုင်ငံမှာ ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာအသစ် ၂၀၉၈ ဦးရှိတယ် . . .
. . . ဆိုတာတွေသိရခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်သားများအတွက် ဘာအကျိုးများပါသနည်း။ (များခဲ့သည်ဆိုလျှင် ဘယ်ပုံ အကျိုးများကြောင်း ထောက်ပြပါ။)
စင်ကာပူအစိုးရက ထုတ်ပြန်သည့် ဘယ်နေရာမှာ ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရတာ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဘယ်ဒေသတွေမှာ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရသူတွေ အများဆုံးနေသည် စသဖြင့် ပြည်သူများ သိရသည့်အတွက် ထိုနေရာများကို ရှောင်ရှား နိုင်သည်။ ထိုနေရာများကို cluster ဟု ခေါ်သည်။
နောက်ပြီး လူစုလူဝေးရှိသည့်နေရာအားလုံးကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းကျောင်းတွင် အထဲမဝင်ခင် ကတည်းက အပူချိန်တိုင်းသည်။ သားတို့ကျောင်းမှာလည်း ကျောင်းသားတွေမှာ ကိုယ့်ဘာသာ သာမိုမီတာ ယူသွားရ သည်။ ကျောင်းကို အပူချိန်တိုင်းပြီးမှ ဝင်ရသည်။ ကျောင်းက အခြေအနေတွေကို မိဘများသိရအောင် သတင်းထုတ်ပြန် ပေးသည်။ သတိထားရမည့်အချက်၊ ဆောင်ရန်, ရှောင်ရန်များ ပို့ပေးသည်။
သည်ကိစ္စသာ အကုန်ရေးပြရလျှင် ဆယ်မျက်နှာနှင့်တောင် မပြီးပါ။
သို့သော် ယခုက ကျွန်ုပ်ပို့စ်အပေါ် အငြင်းပွားနေသည့် မိတ်ဆွေတို့ သိစေရန် အနည်းငယ်မျှသာ ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့လည်း အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတွေ ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာ လေ့လာစေချင်ပါသည်။
ချည်တိုင်တွင် ကြိုးချည်ပြီး လှေကို အသားကုန် လှော်မနေကြစေလို။
၇ မတ်လ၊ ၂၀၂၀။ ည ၉ နာရီ မိနစ် ၂၀
အေးငြိမ်း - ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် မိုင် ၂၀၀၀ ကိစ္စ Reviewed by MoeMaKa on 6:00 AM Rating: 5